I-Mamina ikhophi: UCatherine Zeta-Jones wafika ekuboniseni uMichael Kors nendodakazi yakhe esekhulile
Umdlali wesifazane oneminyaka engu-47 ubudala, u-Catherine Zeta-Jones akadingi ukubheka kabili emhlabeni wonke, bheka nje indodakazi yakhe, uKeri Douglas, oneminyaka engu-14 ubudala, onyaka ngamunye unyaka wakhe.
Uma ngaphambi kokuba uCatherine Catherine Zeta-Jones avele emicimbini ehlukahlukene yena noma uMichael Douglas, manje, lapho engekho umyeni wakhe, inkampani ingakhiwa yindodakazi yabo uCary. Izolo, umdlali wezandla okokuqala wakhipha intombazane yakhe esekhulile, ehambele ukuboniswa kweqoqo elisha lezingubo ngumklami wefashini uMichael Kors eMnyangweni WezeMidlalo eNew York.
UKeri Douglas noCatherine Zeta-Jones eMichael Kors babonisa eNew York
UCatherine wayebukeka enhle, egqoke izingubo ze-black black nge-V-neck ejulile nebhande elikhulu lesikhumba elivela kuMichael Kors, elibiza amakhilogremu angu-1,235 amahle kakhulu, okugcizelela ukulingana kwakhe okuncane.
U-Keri naye wakhetha isembatho esincane, esine-laconic esine-black top-bando ngemikhono emide kanye neketi elifushane eliphuzi elinomfanekiso wegolide.
Ukufaniswa komama nendodakazi kubonakala, kanti izintatheli zaseNtshonalanga sezivele zithi uKeri ikhophi encane kaCatherine.
Ochwepheshe, ukuhlola idatha yangaphandle kaDouglas osemusha, sebevele bebikezela ukuthi imodeli yekhanda elihle kakhulu lomsebenzi. Ngokombono wabo, umlandeli we-Zeta-Jones akayena ophansi kunendodakazi ye-supermodel uCindy Crawford, uKaye Gerber oneminyaka engu-16 ubudala, okwenzeka ukuthi, i-New York Fashion Week yaba yi-debut kule podium.
Ingabe ufuna ukubheka okuhle nge-make-up isabelomali? Catherine Zeta-Jones uyazi kanjani!
Impelasonto yezemidlalo uCatherine Zeta-Jones noMichael Douglas: "Ukugijima ekuseni kusimangalisa"
UMichael Douglas wathola izinsolo zokuhlukunyezwa ngokocansi, kodwa wakwazi ukuphikisa kusengaphambili!
Ukwengeza, ngaphezu kukaKeri, abashade bakaZeta-Jones noDouglas oneminyaka engu-72 ubudala banendodana endala, uDylan oneminyaka engu-17 ubudala.
Catherine Zeta-Jones noMichael Douglas
Catherine Zeta-Jones noMichael Douglas nabantwana
UJames Corden waba nguyise wesithathu
Ukuphila komuntu siqu Macy Williams
Izinkinga ziyaqhubeka nokuhlasela uVictoria Beckham ngonyaka omusha!
UDrew Barrymore wafaka icala ngokumelene nesahlukaniso
UHilary Swank noRuben Torres bamemezela ukuhlanganyela kwabo
UJohnny Depp unomcimbi nomdlali oneminyaka engu-23 ubudala uLucky Boynton
Odadewabo uHadidi batshele ukuthi balungiselela kanjani umbukiso we-Victoria's Secret
UJennifer Lawrence noDarren Aronofsky bahlangana?
UGeorgina Rodriguez, intombazane uCristiano Ronaldo, wayeziqhenya ngokulingana nomuntu onamandla kakhulu
Ngenxa kaDonald Trump, uStephen Baldwin walwa nomfowabo omdala u-Alec
UGeorge Clooney nomkakhe u-Amal nomamazala uBaria bavakashela umkhankaso we "Suburbicon" eLos Angeles
U-Irina Sheik wavutha amahemuhemu okukhulelwa futhi wazama ngengubo "yomshado"
"Captain America" ​​uChris Evans wahlukanisa izindlela noJenny Slate
Ukuphila komuntu siqu ka-Emily Rataskovski
Ama-shorts ama-denim - amamodeli enhle kunazo zonke kuwo wonke amathrekhi
Ingubo ngaphandle kwemikhono
Umdlavuza we-larynx - izimpawu
Ukunakekela ama cherry entwasahlobo
Inyanga yesi-7 yokukhulelwa
Ingubo yomshado omnyama
Ungayiphuza kanjani i-creatine?
I-Lumbar osteochondrosis - ukwelashwa
UFrances McDormand uthathe i-Oscar!
Ungayilungisa kanjani izingono zokudla?
Ifenisha ephakanyisiwe yesikhombisi
UKylie Jenner nesoka lakhe uTyga babonisa indlela abahamba ngayo eholidini eMexico
UFicus Benjamin - ukukhiqiza
Amapaki wamanzi e-UAE
Isiketi sepensela ye-beige
Izikhwama ezenziwe ngemfashini 2015-2016
I-colostrum kubesifazane abakhulelwe